Ibsa Gaddaa Du’a Jaal Liidiyaa Namarraa Ilaalchisee | Union of Oromo Students in Europe
← Ilmaan Oromoo Mana Hidhaa Qaallitti Keessaa Dhabaman!
Diddaan Barattootaa gara Raayyaa Waraanaatti Ce’e! →
Ibsa Gaddaa Du’a Jaal Liidiyaa Namarraa Ilaalchisee
Hunda dura du’aan boqochuu Jaal Liidiyaa Namarraa ilaalchise gadda ol’aanaa nutti dhagayame maqaa Tokkummaa Barattoota Oromoo Awurooppaatiin ibsina.
Akka seenaan sabboontotaa ragaa bahutti, Jaal Liidiyaa Namarraa wayita biyya keessa turte irraa eegalee barattoota Oromoo waliin ijaaramuun sochii barattoota Oromoo keessatti qoodni gumaachite ol aanaa dha. Erga biyya alaa dhuftee ammoo barattoota Oromoo biyya Awurooppaa keessatti of ijaaranii qabsoo bilisummaa deggeranitti makamuun qooda guddaa kennite. Wayita asi biyya UK turtetti rakkoon uummata Oromoo addunyaa biratti akka hubannoo argatu taasisuuf Tokkummaa Barattoota Oromoo Awurooppaa keessatti ijaaramuun qooda ol aanaa gumaachite. Yeroo haalli isaa akka hardhaa kennataa hin turetti, biyyoota Awurrooppaa adda addaa irra naanna’uun TBOA ijaaruu keessatti qoodni ishiin gumaachite guddaa dha.
Jaal Liidiyaan sabboontuu, nama Oromoof dhimmitu, humnaa fi jireenya ishii guutuu Oromoof oolchite, akkasumas rakkataa Oromoo gargaaruutti hiriyaa kan hin qabne ta’uu ishii Tokkummaan Barattoota Oromoo Awurooppaa ragaa baha.
Du’aan boqochuun Jaal Liidiyaa Namarraa oduu qofa ta’ee akka hin hafneef, TBOA’n sababi Oromummaa ishiin ittiin qe’ee dhaloota ishee irraa hanqatte dhugummaa isaa calaqqisuuf daran ni socho’a. Jaal Liidiyaan du’aan haa boqottu malee Oromummaa ishiin ittiin jireenya ofii dhabde ammallee qabsoon isaa ittuma jira. Yaa saba Oromoo, biyya ormaa bakka sobni jiidhaa gogsuu kana keessatti kutannoon Jaal Liidiyaa booree nuuf haa tahu malee gadda qofa ta’ee nu keessatti hin hafin.
Lubbuun Jaal Liidiyaa kan inni nagayaan boqotu yoo nuti dhugaa Oromummaa ishiin ittiin jireenya dhabde daran gara fuula-duraatti tarkaanfachiifne dha. Gadduufii callaan lubbuu ishiif obsa hin ta’u. Qabsoon ishiin jalqabde itti fufuu qaba. Sana dhugoomsuuf ammoo TBOAn saba Oromoo faana hojjechuuf dirqama guddaatu irra jira.
Dhuma irratti, lubbuu Jaal Liidiyaaf boqonnaa fi jannata hawwaa, maatii fi firoottan akkasumas jaallan ishii maraaf sabrii kadhanna.
Biyyeen araaraa haa taatuuf!
Tokkummaan nu gidduutti haa lalisu!